News | Tag: Champions league
च्याम्पियन्स लिगः भ्यालेन्सियालाई हराउँदै एटलान्टा क्वाटरफाइनलमा
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत एटलान्टाले सानदार जित निकाल्दै क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत आज यी ८ खेल हुँदै
काठमाडौँ । च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत आज ८ खेलहरु हुँदैछ । समूह चरणको पाँचौ खेल अन्तर्गत आज राति दुई अलग–अलग समयमा खेलहरु हुन लागेका हुन् ।
स्विमसुटमा महिला दौडिएपछि पोर्नसाइटको आम्दानी ३.५ मिलियन युरो, जरिवाना १५ हजार मात्रै
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिगको फाइनल चलिरहेको बेला स्विमसुटमा दौडने महिलालाई जरिवाना सुनाइएको छ । किन्सी वालान्सी नामकी उक्त महिललाई युईएफएले ५ हजार युरो जरिवाना गरेको हो । त्यस्तै, पोर्न साइटको विज्ञापन गरेको भन्दै प्रहरीले पनि उनलाई १० हजार युरो जरिवाना सुनाएको छ । यससँगै उनले जम्मा १५ हजार युरो जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यी हुन् च्याम्पियन्स लिग ‘टिम अफ द इयर’मा परेका खेलाडी
काठमाडौँ । युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय युइएफएले सन् २०१८–१९ को च्याम्पियन्स लिगमा गरेको प्रदर्शनको आधारमा उत्कृष्ट २० खेलाडीको छनोट गरेको छ । युइएफएको टेक्निकल टिमले चयन गरेको खेलाडी सूचीमा लिभरपुलका मात्रै ६ जना खेलाडीहरु परेका छन् । त्यस्तै अर्का फाइनालिष्ट क्लब टोटनहमका तीन जना खेलाडी परेका छन् ।
च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा स्विमसुट लगाएर मैदानमा कुद्ने यी महिला को हुन् ?
एजेन्सी । शनिबार राति सम्पन्न च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेलमा लिभरपुल विजयी भइ उपाधी उचालेको छ । मड्रिडस्थित वान्डा मेट्रोपोलिटानोमा सम्पन्न खेलमा टोटनहमलाई २–० गोलले पराजित गर्दै लिभरपुलले उपाधि जितेको हो ।
च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा लिभरपुललाई थोरै टिकट दिएपछि सिइओ मुरेको आपत्ति
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा लिभरपुलले पाएको टिकटप्रति क्लबका सिईओ पिटर मुरेले आपत्ति जनाएका छन् । जुन १ मा स्पेनको मड्रिडस्थित वान्डा मेट्रोपोलिटानोमा हुन लागेको फाइनलमा लिभरपुलले जम्मा १६ हजार ६१३ टिकटमात्रै पाएको छ ।
आगामी सिजनको च्याम्पियन्स लिग रियल तथा एट्लेटिको मड्रिडको लागि कठिन हुने पक्का
एजेन्सी । सिजन २०१९–२० को च्याम्पियन्स लिग रियल मड्रिड तथा एट्लेटिको मड्रिडको लागि कठिन हुने पक्का भएको छ । एट्लेटिकोले घरेलु लिगको दोस्रो स्थानमा तथा रियलले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाएको कारण यी दुई क्लब समूह चरण ड्रमा दोस्रो पटमा हुनेछन् । सोही कारण पहिलो पटमा रहेका बलिया टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा दुई मड्रिड क्बल समूह चरणदेखि नै दबाबमा पर्ने पक्का भएको हो ।
बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिनुमा दोषी को ?
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिएपछि बार्सिलोना समर्थकहरुले यसको दोष प्रशिक्षक अर्नेष्टो भालभर्देमाथि थोपरेका छन् । सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा ३–० गोलको अग्रता लिएर पनि दोस्रो लेगमा लिभरपुलसँग ४–० गोलले पराजित भएपछि रुष्ट बनेका बार्सा समर्थकहरुले दोष प्रशिक्षकमाथि थोपरेका हुन् ।